शासनको औचित्य | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
राज्य व्यवस्था किन र कसका लागि ? यो प्रश्न राजनैतिक दर्शनका लागि परापुर्वकालदेखि चिन्तन हुँदै आएको विषय हो । शासन कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीति शास्त्रमा अनेकौ मान्यता र प्रयोग हुदै आएको पनि ऐतिहासिक पृष्टभूमी छ । रामराज्य भनेर असल शासनले जनता खुसी हुन्छन भनि आदर्श वाक्यका रुपमा प्रशंशनीय छ । यी यावत विषयको पृष्ठभूमी कुनै दर्शनका लागि बहश गर्न होइन, प्रचण्ड बहुमत रहेको धेरै शक्तिशाली सरकार नेपालमा सत्तारुढ छ । यसलाई असल काम गर्नका लागि झण्डै तीन चौथाईको जनमत प्राप्त रहेकोले अपेक्षा स्वभाविक रुपमा बृद्धि भएका छन् । मूल कानून संविधाले पनि मौलिक हकका रुपमा विस्मयकारी व्यवस्था रहेकोले त्यसैलाई सार्थक पार्न आशा भरोसा गरी मतदान गरेको थियौं । त्यस अनुरुपको गति र मति कस्तो छ समीक्षा विश्लेषण गर्न आवश्यक भएको छ ।
नौ महिना मात्र भएकोले निराश हुन पर्ने होइन भनि महत्वाकांक्षी प्रलाप सुनिन्छन् जादुको छडी जस्तो तुरुन्त हुन सक्तैन समय लाग्छ भनि भाषण आईरहेका र त्यो ठीक पनि भएको हुनाले चित्त बुझाउन पर्ने हो कि ? भनि चिन्तन गर्दा रेल पानी जहाजका लागी समय लाग्ला, विकास कुन गतिमा भईरहेको छ त्यसलाई हेर्न भन्दा पनि गति मात्र होइन मति नियत निष्टा इमान्दारी तर्फ सचेत रहन आवश्यक छ । त्यसो जिज्ञासा र प्रश्नहरुले उथलपुथल मच्चाई रहेको छ ।
विशाल जनमत प्राप्त सरकारले काम गर्न सकेन भनि सत्तारुढ दलकै उच्चदेखि निम्न तहसम्मका नेताजीहरुका गुनासा सुनिन्छन् । पदवी हानथाप कै लागि होला भनि नकार्न नमिल्ने स्थिति देखा परि रहेको छ । ठूला चाडपर्वहरुमा चिनी लयायतका सामानहरुमा भएका मुल्य बृद्धि नियन्त्रण किन गरिएन, चिनी हजारौं टन भन्सारमा नै अझै किन थन्कियो ? बाइडबडी जहाज भाडामा हो वा किनेको भनि उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले निश्चय गर्न सकेनन् । नेपाल वायु सेवा निगम धरासायी भई ३० अरब तुरुन्त नदिए चल्न नसक्ने भनि माग भईसकेको छ । श्वेतपत्र जारी भएको छ । प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार त्यस्तो छैन भनि अन्तरवार्ता दिई
रहेका छन् । ब्रेकमा गडबडी कै कारण ७ दिन देखि जहाज ग्राउण्डेड छ भनि आजै समाचार सुनियो अख्तियार छानविनका लागि शंसदीय समितिबाट पत्राचार भई सकेको छ । त्यसमा ५ अरवको घोटाला प्रकरणमा आएको भनिन्छ । महान चतुर दिगम्बर झालाई बधाई छ उही सरकारले अयोग्य घोषित भनेका प्राणी ८÷१० करोडले पनि पद थमौती हुन नसकेका उसै
सरकारबाट स–सम्मान नियुक्त भए । सिण्डिकेट तोड्ने घोषणाका साथ वाहवाही कमाएमा गृहमन्त्रीको उत्साहमा पानी पार्दै यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सिण्डिकेटवालाको रक्षा कवच बनेर त्यो घोषणा धुलो पार्ने काम भयो, सुन तस्करी काण्डमा थुनिएका धमाधम छुट्दै छन, कसैलाई झुठा आरोप लगाईएको हो वा छोड्ने निकायमा विचलन आएको हो यसको छानवीन हुनु पर्नेमा देखिएन ।
बलात्कार हत्या हिंसाका घटनाहरु शर्मसार पार्ने गरी चुलिएका छन, तर दोषी पत्ता लाग्न पनि मुश्किल भइरहेको छ, यसको जवावदेही कसैमा रहन्छ वा छैन ? मुल्य बृद्धि अनुगमन नियन्त्रण केही हुन सकेन । संघ प्रदेश बीच द्वन्द बढी रहेको छ । संविधान धरासायी पार्ने गतिविधि तिव्र भएका छन् । जताततै घुस भ्रष्टाचार हुँदा यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता र सामर्थ कसैमा पनि देखिएन । संविधान शंशोधन नभएर समर्थन फिर्ता लिने धम्की आई नै सकेको छ । मन्त्रीहरु निरीह बनेका छन् । निर्माण ठेकेदारहरु माथि कार्वाही हुन्छ भनि पदासिनहरुले बोले पनि त्यसको कुनै प्रभाव परेको देखिएन । करोडौं रकम खर्च गरेर चुनाव लड्न पर्ने साधन र श्रोत खोल्ने कही कतैबाट पनि कठोरताका साथ प्रश्न भएन । कसैले कामै नपाएको कसैमा बढी जिम्मेवारी बोझ बढ्दै गएको हुँदा काम गर्ने तरिका नै गलत भए तर्फ छलफल चलाउन नै मानिएन भन्ने छ । कमिटीहरु या त गठन नै हुदैनन् भए पनि बैठक बस्दैन, अदालतहरु प्नि विवादित भईसकेका छन् भने नक्कली प्रमाणपत्रधारी सैनिक मुख्यालयसम्म पुग्ने तर्फ गहिरो छानविन सुरु भईसकेको छ ।
संविधानलाई उपलब्धी र यसमा वर्णित मौलिक हक सम्बन्धी कानून बनायौं भनि गर्व गर्नेहरुले ५ किलो चावलका लागि हुम्ला बाट १० दिन पैदल आएका भोखमरी रहेको उपचार नपाएको अन्याय परेकाहरुको सुनवाई नभएको अनेक विषयले आजको शासनको औचित्य माथि प्रश्न उठी सकेको छ । प्राप्त उपलब्धि भनेको मूल कानून संविधान धरासायी हुन धेरै समय लाग्दैन । बोलाई र गराईमा फरक भए समाधान असल आउन सक्तैन जनतामा व्यापक अविश्वास भ्रष्ट आचरण भए तर्फ निरन्तर असन्तोष बढी रहेको हुँदा शक्तिशाली सरकारका दिन गिन्ति शुरु भएको आभाष भईरहेको छ । चाणै नै विष्फोट भए नयाँ नेपालको निर्माण अवश्य हुनेछ ।
← भिमदत्त नगरपालिकाको दायित्व
अझै पहाडी जनजीवन कष्टप्रद →